Nidaamka aqoonsiga Mimo Contour - MimoWork
Nidaamka Aqoonsiga Kontour
Maxaad ugu baahan tahay Nidaamka Aqoonsiga Kontoroolka Mimo?
Iyadoo horumarinta ee daabacaad dijital ah, ah warshadaha dharka iyo warshadaha xayeysiiskawaxay soo kordhiyeen farsamadan ganacsigooda. Goynta dharka dhijitaalka ah ee daabacan, qalabka ugu caansan waa goynta mindida gacanta. Tani miyay u muuqataa habka ugu jaban ee goynta run ahaantii qiimaha ugu hooseeya? Malaha maya. Hababka goynta caadiga ah waxay kugu kacaysaa waqti iyo shaqo badan. Waxaa intaa dheer, tayada goynta sidoo kale waa mid aan sinnayn. Markaa dhib malehdheeha sublimation, DTG, ama daabacaadda UV, Dhammaan dharka daabacan waxay u baahan yihiin nidaam habaysan oo u dhigma si ay si fiican ugu habboonaato wax soo saarka. Sidaas darteed,Aqoonsiga Mimo Contour waa halkan si aad u noqoto doorashadaada smart.
Dib ugu laabo hababka laysarka
Mimo Contour Nidaamka Aqoonsiga, oo ay weheliso kamarad HD ah waa ikhtiyaar caqli-gal ah oo goynta laysarka ee dharka leh qaabab daabacan. Marka la eego jaantusyada garaafyada daabacan ama isbarbardhigga midabka, nidaamka aqoonsiga xuubka wuxuu ogaan karaa jaangooyooyinka goynta iyada oo aan la jarin faylasha, gaarista hab toos ah oo ku habboon.
Nidaamka Aqoonsiga Contour ee Mimo, waad awoodaa
• Si fudud u aqoonsan cabbirrada iyo qaababka garaafyada kala duwan
Waxaad daabacan kartaa dhammaan naqshadahaaga, iyadoon loo eegin xajmiga iyo qaabka. Looma baahna kala saarid adag ama qaabayn.
• Looma baahna in la gooyo galalka
Nidaamka aqoonsiga kontoorka ayaa si toos ah u soo saari doona dulucda goynta. Looma baahna in horay loo sii diyaariyo faylasha goynta. Tirtir baahida loo qabo beddelka faylka qaabka daabacaadda PDF una beddelo qaabka qaab goynta.
• Gaadhi aqoonsiga xawaaraha sare-sare
Aqoonsi kastaa wuxuu qaataa 3 ilbiriqsi oo kaliya taas oo si weyn u wanaajisa waxtarka wax soo saarka.
• Qaab aqoonsi oo weyn
Thanks to Canon HD kamarada, nidaamku wuxuu leeyahay xagal aad u ballaaran oo muuqaal ah. Haddi ay maradaadu tahay 1.6m, 1.8m, 2.1m, ama xataa ka balaadhan, waxaad isticmaali kartaa nidaamka aqoonsiga koontoor si aad u habayso.
Socodka Shaqada ee Goynta Aqoonsiga Laydhka ee Mimo Contour
Maadaama ay tahay hab toos ah, xirfado farsamo oo yar ayaa looga baahan yahay hawlwadeenka. Qofku wuu shaqayn karaa kombuyuutar ayaa dhamaystiri kara hawshan. Habka oo dhan aad buu u fudud yahay oo u fudud hawlwadeenku inuu qabto.
1. Dharka Quudinta tooska ah
Dul gal quudinta
Garashada si joogto ah u habaynta
2. Si Toos ah u aqoonsanaya Koontaroolka
Kamarada HD oo sawiro ka qaadaysa dhar
Si toos ah u aqoonsanaya safafka daabacan
3. Goynta Contour
Xawaaraha sare iyo goynta saxda ah
Looma baahna gooyn dheeri ah
4. Kala-soocidda iyo Dib-u-celinta Qaybaha Goynta
Si ku habboon u ururinta goynta goynta
Codsiyada ku Haboon ee Plus Aqoonsiga Koontaroolka
Xiro Firfircoon, Gacmo-gacmeedyo, Gacan-gacmeedyo Lugaha, Bandanna, Xarig-madaxeed, Barkin Kor-u-qaadis ah, Farsamooyin-soo-baxa, Daboolka Wajiga, Maaskaro, Boodhadhka Dibad-baxa, Calannada, Boodhadhka, Boodhadhka-boodhadhka, Foomamka Dharka, Daboolka Miisaska, Gadaal, Xardh-Daabacan, Codsiyo, Dul-saarid, Shaadhadhyo, Qalab xabag ah, warqad, maqaar…
Ma waxaad raadinaysaa Tilmaamaha Laser-ka ee Onlineka ah?